မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းသောစမ်းသပ်သူ၊ Roughness Meter - KAIRDA
Brinell Hardness ကိုစမ်းသပ်သူ
Leeb Hardness ကိုစမ်းသပ်
Rockwell Hardness ကိုစမ်းသပ်
Shore Hardness ကိုစမ်းသပ်သူ
Vickers Hardness ကိုစမ်းသပ်
Surface Roughness တူရိယာ
Ultrasonic Flow မီတာ
ခရီးဆောင် Ultrasonic Flow မီတာ
Wall တပ်ဆင်ထား Ultrasonic Flow Meter
အိတ်ဆောင် ultrasonic Flow Meter TUF-2000H ပေါ်တွင်ညှပ်ပါ
အိတ်ဆောင် ultrasonic Flow Meter အပေါ်ညှပ် TUF-2000H အိတ်ဆောင် ultrasonic Flow Meter ပေါ်ရှိ Clamp သည်စီးဆင်းမှုစစ်တမ်းများနှင့်ပိတ်ထားသောပိုက်အသုံးချမှုအတွက်အရည်များကိုတိုင်းတာရန်မလိုအပ်သောသန့်ရှင်းသောရေတွင်အများအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်သောစံနမူနာဖြစ်သည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: •မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုင်းတာသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် Ultrasonic အားနည်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ KUT600
Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 သည်အလုပ်အပိုင်း၏ချွတ်ယွင်းမှုများမရှိဘဲလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူတိကျစွာစစ်ဆေးခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ KUT600 သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစက်မှုလုပ်ငန်းမပျက်စီးစေနိုင်သည့် detector တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း၊ အလိုအလျောက်ရရှိခြင်း• KUT600 တွင် DAC စံချိန်စံညွှန်း ၁၄ ခုရှိသည်။ •မြန်နှုန်းမြင့်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်အလွန်နိမ့်သောဆူညံသံ။ •အားကောင်းသော pc software နှင့်အစီရင်ခံစာများကို Excel သို့တင်ပို့နိုင်သည်။ • Metal case Featur ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်သယ်ဆောင်နိုင်သောမာကြောစက်များအတွက်ကြိတ်စက် K ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်သယ်ဆောင်နိုင်သောမာကြိတ်စက်များကြိတ်စက် KH200S သည်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုတွင်အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့်သံမဏိသတ္တုပြားများ၊ အတုသံမဏိလိပ်များ၊ သံသတ္တုပြားများစမ်းသပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပြုလုပ်သည်။ အဓိကအသုံးပြုမှု - ၁။ တပ်ဆင်ထားသောစက်ယန္တရားများနှင့်အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများ ၂ ။ မှို၏အလိုင်ခေါင်းသုတ်ပါ 3. အကြီးစားအလုပ်အပိုင်း 4. အုတ်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ 5. ပုံမှန်မူရင်းမှတ်တမ်းတင်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုရလဒ်လိုအပ်သောအမှုပေါင်း 6. သတ္တုပစ္စည်းဂိုဒေါင်၏ပစ္စည်းဖော်ထုတ် 7. 7. အမြန်စမ်းသပ်မှု ...
ခရီးဆောင် Leeb Hardness ကိုစမ်းသပ်သူ KH200
Digital Leeb Hardness Tester KH200 တွင် Leeb Rebound စမ်းသပ်ခြင်းကိုသတ္တုများအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသည်။ ကျယ်ဝန်းသောမှိုပုံသဏ္Dieာန်များ၊ ၀ ိုင်ယာနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဖိအားပေးသည့်ရေယာဉ်၏ပျက်ကွက်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့မီးစက်နှင့်အခြားကိရိယာများ၊ အကြီးစားအလုပ်အပိုင်းအစ၊ တပ်ဆင်ထားသောစက်ယန္တရားများနှင့်အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများ။ အင်္ဂါရပ်များ•ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ၌အချက်အလက်များသက်ဆိုင်မှုရှိ၊ •၎င်းသည်တုန်ခါမှုကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အိတ်ဆောင် Leeb Hardness ကိုစမ်းသပ်သူ KH180
ဒီအိတ်ဆောင် Leeb Hardness Tester သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတော်တော်များများ၌အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သံမဏိနှင့်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ မီးခိုးရောင်၊ သံဓာတ်၊ သတ္တုအလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီသွပ်သတ္တု၊ အလွိုင်း (ကြေးဝါ)၊ သန့်ရှင်းသောကြေးနီ၊ Application Hardness ကိုတံဆိပ်ခတ်မှုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအောက်ဖော်ပြပါသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော tester ကိုအသုံးပြုသည်။ တစ် ဦး ဆောင်သောမှို၏လိုင်ခေါင်းအိတ် ...
Split Type Coating ထူသည့်တိုင်းတာခြင်း KCT300
Split Type Coating Thickness gauge KCT300 Split အမျိုးအစား Coating Thickness gauge KCT300 သည်အကြမ်းခံသောလေလုံမှုန့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အမဲဆီ၊ အစိုဓာတ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ တူရိယာ၏သက်တမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ တိုက်စားမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောအပေါ်ယံလွှာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ဆေးရေးဌာနများတွင်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။
Split အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုစမ်းသပ်သူ KR310
Split အမျိုးအစား Surface Roughness Tester KR310 Split အမျိုးအစား Surface Roughness Tester KR310 သည်ပြင်ပ drive ယူနစ်ပါ ၀ င်သည့်မိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းသောစမ်းသပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းအား stylus drive unit ကိုစံတိုင်းတာခြင်းအတွက်၎င်း၏အဓိကယူနစ်အတွင်းသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး၊ မည်သည့် orientation ကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုင်းတာခြင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ထောက်ပံ့ cable ကို။ driver ကိုခွဲခြားပြီးရိုးရိုးလေးအဆင့်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် DSP ချစ်ပ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဒေတာများကိုအသုံးပြုသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်သည်။
Pocket Surface Roughness Tester KR110 Pocket Surface Roughness Tester KR110 သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးအကြမ်းခံသောသေးငယ်သောစမ်းသပ်သူဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များမှာ RA, RZ, RQ, RT တိုင်းတာခြင်းတွင်တိုင်းတာသည့်အခါ sensor သည်တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်မောင်းနှင်သည်၊ လေဖြတ်ခြင်းအလျားတစ်လျှောက်တွင်ရွေ့လျားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် sensor အစွန်အဖျားသည်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုနှင့်အညီဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားသည်။ ထို့နောက် Piezoelectric Chip Deformation သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အချက်ပြများသည် amplified, filtered နှင့် digitized ဖြစ်သည်။ th ...
အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ Surface Roughness Tester၊ Ultrasonic ထူသောတိုင်းတာခြင်း၊ အဖုံးအထူ Gauge၊
KAIRDA GROUP CORPORATION သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှ NDT ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည် ...
KAIRDA သည်ကမ္ဘာ့ NDT လုပ်ငန်း၏တန်ဖိုးကိုကိုယ်ပိုင်တာ ၀ န်အဖြစ်ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ပြီးစျေးကွက်သို့ပြီးပြည့်စုံသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
အိတ်ဆောင် Leeb Hardness Tester သည်သတ္တု၏မာကျောမှုကိုအလွယ်တကူလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ Leeb Hardness Tester ၏စမ်းသပ်မှုနိယာမမှာအချို့သောအမြန်နှုန်းနှင့်အခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည်။
၁။ မျက်နှာဖုံးမ ၀ တ်ခင်သင့်လက်ကိုပိုကောင်းအောင်ဆေးကြောပါ။ ၂။ အပြင်ဘက်တွင်အရောင်ခြယ်ထားသည့်အပြင်အ ၀ တ်အစားပါ ၀ င်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အနိမျ့ဝန် Brinell HardnessTester HBS-62.5
Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5 Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5 သည်ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုပစ္စည်းများနှင့်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ Brinell ၏မာကျောမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထူးသင့်လျော်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ•ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နည်းပညာ၊ မြင့်မားသော resolution ဖြင့်တိုင်းတာသည့်စနစ်နှင့်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ • soft key ထည့်သွင်းမှု၊ •အလင်းအရင်းအမြစ်ညှိနှိုင်းမှု; •ရွေးချယ်နိုင်သောစမ်းသပ်ခြင်းပုံစံ၊ ပြောင်းလဲခြင်းဇယားများ၊ အကြို ...
အီလက်ထရောနစ် Brinell Hardness Tester လက်ကား HB ...
Electronic Brinell Hardness Tester လက်ကား HBE-3000A မှအထူးသဖြင့်အလူမီနီယမ်ကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောသတ္တုပစ္စည်းများ၊ သံမဏိသတ္တုများနှင့်အလွိုင်းများ၊ သံမဏိအမျိုးမျိုး၊ မာကြော။ သံမဏိအမျိုးမျိုးအတွက်မာကျောသောတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်အတွက် system system တွင်ထည့်သွင်းထားသော circuit type sensor ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ , သံဖြူစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Specification Model HBE-3000A စုစုပေါင်းစမ်းသပ်မှုအင်အား 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N, 2450N, 4900N, 7350N, 9800N, 14700N, 29400N Hardness Test Range 8 - 650 HBW (Hardmetals သံမဏိဘောလုံး) Amp ...
တိုက်ရိုက်ဖတ်ခြင်း Brinell Hardness Tester HBS-3000
Direct Reading Brinell Hardness Tester HBS-3000 သည်တိကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မိုက်ခရိုစက်ထိန်းချုပ်ထားသောစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏တံခါးပိတ်စနစ်ဖြစ်သည်။ HBS-3000 သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုစမ်းသပ်သည်။ အဓိက Feature •ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်အာရုံခံကိရိယာတင်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ •စမ်းသပ်မှုအင်အား ၁၀ ဆင့်ရှိသော Photoelectric sensing စနစ်။ • soft key input မှတဆင့်စမ်းသပ်နည်းနှင့်အမျိုးမျိုးသော har အကြားပြောင်းလဲခြင်း။
Desktop လက်စွဲစာအုပ် Rockwell Hardness Tester HR-150A
Desktop လက်စွဲစာအုပ် Rockwell Hardness Tester HR-150A သည်အဓိကအားဖြင့် ferrous metal, ferrous သတ္တုနှင့် non-metall ပစ္စည်းများဖြစ်သော Rockwell ၏မာကျောမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ စမ်းသပ်မှုဖိအား၏သက်ဆိုင်သောမြန်နှုန်းကိုကြားခံကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ လက်ဘီးကိုဖိအားပေးသည့်ဖိအားကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖိအားပြောင်းလဲမှုကိုရရှိနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်နေသဖြင့်စမ်းသပ်သူကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Specification Model HV-30T ကန ဦး ဖိအား 98 ...
လိပ်စာ:504A အခန်း၊ Chengyuan အဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၃ Jiancaicheng အလယ်လမ်း၊ Haidian ခရိုင်၊ ပေကျင်း 100096, PR CHINA ။